Your jir phone Samsung noqdo gaabis ah oo gaabis ah, sidaas darteed aad rabto in la gaarsiiyo in mid cusub, sida Samsung Galaxy S5? Waxaad tahay taageerayaasha Samsung oo mar walba jecel yihiin in ay soo iibsato ugu dambeeyay ee Samsung telefoonka ama kiniin ah in ay la kulmaan Samsung nolosha ugu dambeeyay ee mobile? Waxba ma ahan wixii sababaha ka dhigaysa kuu soo gudbin ka Samsung in Samsung, waxa ugu dambeeya ee aad doonayso in aad qabato waa in ay ahaadaan inuu ka tago xogta Samsung, oo ay ku jiraan xiriiro, jadwalka taariikhda, music, video, sawiro iyo ka badan oo ka dambeeya on jir Samsung ah. Haddii taasi waxa weeye waxa aad ka werwerayn oo ku saabsan, waxa aad tahay meel sax ah. Maanta, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego sida loo sameeyo Samsung ay u kala iibsiga xogta Samsung si fudud oo ku haboon.
Habka 1. Sidee si ay u gudbiyaan Content ka Samsung in Samsung la Samsung Smart Switch u Free
Habka 2. Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Samsung in Samsung la MobileTrans 1 Click
Habka 1. Transfer Content ka Samsung in Samsung la Samsung Smart Switch u Free
Samsung Smart Switch waa aalad abuuray Shirkadda Samsung to content ka ah iPhone, iPad, BlackBerry iyo qalab Android inay qalab taxane Samsung Galaxy wareejiyo. Sidaas darteed, haddii aad u hesho a Samsung qalab cusub, sida Samsung S5, waxaad si fudud u wareejin karaan xiriirada, music, video, sawiro, qoraalo, jadwalka taariikhda, iwm ka Samsung qalabka taxane Samsung Galaxy. Waa lacag la'aan ah, laakiin waxa kaliya ay u taageeraan qalab Samsung xadidan in muddo ah. Baro wax badan oo ku saabsan Samsung Smart Switch >>
Waa maxay waxa ay ku wareejin: Xiriirada, Calendar, Messages, Music, Photos, Video, Ogow, iwm
Faa'iido: Free Qasaarooyinka: taageeraan 11 aaladaha Samsung Galaxy Taxanaha oo kaliya
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka Samsung in Samsung via Samsung Switch Smart
Tallaabada 1. qalab Samsung jir iyo mid cusub, u furan Google Play. Raadi Smart Mobile Switch app, download oo ku xidh labada qalabka Samsung.
Tallaabada 2. wada ama ugu yaraan gudahood 4 inches saar labada qalabka Samsung.
Tallaabada 3. qalab Samsung jir, u furan Switch Smart oo sax faylasha aad rabto si ay u gudbiyaan. Waxaad ku wareejin kartaa xiriirada, sawiro, fariimaha, music, note iyo in ka badan.
Tallaabada 4. Tubada Transfer ku saabsan qalabka Samsung jir. Markaas, tag qalab cusub Samsung oo guji OK si aad u hesho files ee laga soo wareejiyay qalab Samsung jir.
Habka 2. Transfer Xogta laga Samsung in Samsung la MobileTrans 1 Click
Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac waa ka duwan oo ah in ay Samsung Smart Switch, kaas oo sameeya fiican in Samsung in Samsung file kala iibsiga. Sidaa daraadeed, aad mid kale ku wareejin karaan barnaamijyadooda, jadwalka taariikhda, xiriirada, sawiro, video, music, abuse call iyo fariimaha muuqan mid ka mid qalab Samsung. Intaa waxaa dheer, version Windows xitaa ku siinayaa awood u leeyahay inuu dib u soo ceshano hayaan Samsung sameeyo Samsung Kies ama Kies 3 iyo xiriirada kala iibsiga, fariimaha oo dheeraad ah si ay u qalab cusub Samsung oo aan ka kaaftoomi kasta. Si aad u gudbiyaan xiriirada iyo taariikhda xisaab-ka Samsung in Samsung, waxaad u baahan tahay inay la soo wareegto in xisaabaadka ee ku saabsan qalabka Samsung jir ah. Fiiro Gaar ah: version MobileTrans Mac ma taageeri wareejinta jadwalka ama koobiyeynta files iyo ka Nokia (Symbian) telefoonka.
Waa maxay waxa ay ku wareejin: barnaamijyadooda, xiriirada, photos, music, video, abuse wac, fariimo iyo jadwalka
1-riix Samsung kala iibsiga file, aad degdeg ah oo ku haboon
la jaan qaada qalabka Samsung socda Android 2.1 iyo ka dib
gurmad Support sanaanayaa sameeyo Kies si ay u gudbiyaan in qalab cusub Samsung
Qasaarooyinka: baahan tahay inaad bixiso
Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada xogta, barnaamijyadooda, music, video, sawiro, abuse wac, jadwalka iyo fariimaha ka Samsung in Samsung?
Tallaabada 1. Download iyo rakibi MobileTrans aad Windows ama Mac computer.
Tallaabada 2. Run MobileTrans. Marka ay suuqa kala aasaasiga ah waxaa soo bandhigay, waxaad tagtaa Phone in hab Transfer Phone.
Tallaabada 3. Isku qalab Samsung jir iyo mid cusub in computer la fiilooyinka USB. Marka si guul ah ku xiran. Waxay la soo bandhigi doonaa suuqa kala iibsiga.
Tallaabada 4. Hubi in waxa content aad rabto in lagu wareejiyo ka dibna riix Start Copy si ay u gudbiyaan jir Samsung cusub Samsung.
Xogta laga Android wareejiyo Android
Music ka Mac dhaqaaq Android
Messages Copy in New Android Phone
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Content ka Samsung in Samsung